ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း, Trusts မှ, ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းစီမံကိန်းများကို
Offshore ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ LLC များ၊ Trusts နှင့်ဘဏ်စာရင်းများကိုတည်ထောင်သည်။
·ဝန်ထမ်းများအပေါ်ရှေ့နေများ· 1906 ခုနှစ်ကတည်းက
တရားစွဲဆိုမှု မှစ. ပိုင်ဆိုင်မှုများကာကွယ်ပါ
အဘယ်ကြောင့် OffshoreCompany.com Choose?
သမာဓိရှိခွငျး, ရိုးသားမှု, မွံ
24 /7တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-လူတစ်ဦး
ကမ်းလွန် Corporation တည်စေ
LLCs, Trusts မှနှင့်ဘဏ်အကောင့်။
အင်အားအကောင်းဆုံး privacy ကိုဥပဒေများနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်မှုဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုအဖြစ်ကွာရှင်း, အကြွေး, တရားစီရင်ပိုင်နှင့်တရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ခွင့်ပြုပါ။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားတွင်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရန်သင့်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းရွှေ့ဖို့တရားစွဲမှုမှသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းဖြစ်နိုငျသညျ, ထို့အပွငျ, သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာအခွန်လပ်ချိန်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးရေခြားမြေခြားကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြီးထွားနိုင်ပေမည်။ ဒီ website သုတေသနနှစ်ပေါင်းအပေါ်အခြေခံသည်နှင့်သင် step-by-step တခုကိုဖွဲ့စည်းအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုလမျးညှနျနိုငျသောသင်ခန်းစာအဖြစ်ရည်ရွယ် "ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ။ " သင်ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကတက် setting နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပြေးဖို့စာသားအားသာချက်များစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြု. အစား, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံတစ်ဦးအကောင့်နဲ့အသင်းအဖွဲ့၌တည်၏။ နေးဗစ်, ကေမန်ကျွန်းစုပနားမား, BVI နှင့်ဟောင်ကောင်ဥပမာ, အားလုံးအလွန်ရေပန်းစားတရားစီရင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေးခယျြမှု၏ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် LLC တက် setting ထဲမှာသင်ပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘဏ်အကောင့်တည်ထောင်ရန်ကူညီနိုင်ပြီးကမ်းလွန်တစ်ဦးကို virtual ရုံးဖွင့်လှစ်။
နေးဗစ် LLC ဥပဒေပြဌာန်းတရားစွဲမှုထံမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်စောငျ့ရှောကျဖို့အချို့သောထူးခြားတဲ့နှင့်ထိရောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေပေးထားပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ & ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်
ရှင်းလင်းစေရန်, ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာအခွန် evading သို့မဟုတ်အစိုးရဆီကပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ဘူး။ ယင်းအစားကပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏အားသာချက်ယူကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ရေးရာ structuring အကြောင်းပါ။ ၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်မှသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဂရုစိုကျသူမည်သူမဆိုရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းယင်းဥပဒေများသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဿုံကိုသင်-ငွေစုကုန်ကျပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကနေဝေး-ရောက်ရှိအကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်နိုင်အောင်နိုင်ငံတကာကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ရန်ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားဝင်နည်းလမ်းများကိုသင်ပြနိုင်ပါ။
အမေရိကန်, ဗြိတိန်, သြစတြေးလျနှင့်အချို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်လူများ, အားဖြင့်၎င်း, အကြီးစား, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအပေါ်အခွန်ကောက်နေကြတယ် ဝငျငှေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဖွယ်ရှိ Apple က Google နှင့်အခြားသူများကိုနိုင်ငံရပ်ခြားအဆောက်အဦများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်လုံးဝဥပဒေရေးရာနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ရဲ့အခွန်ဥပဒေကြမ်းများလျှော့ချရှိသည်ဟုသိရကြ၏။ ထို့အပြင်ကမ်းလွန်သုံ့ပန်းအာမခံကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များတရားဝင် IRC 953 (ဃ) နှင့် 831 (ခ) အရသူတို့ရဲ့အခွန်ဥပဒေကြမ်းများလျှော့ချရှိသည်ဟုအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏အကူအညီနဲ့ပေါင်းသင့်လျော်သောလိုင်စင်ရပညာရှင်များ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူလွန်းဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်မည်အကြောင်းနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအချက်ကိုအလုံအလောက်အလေးပေးလို့မရပါဘူး။ ကမ်းလွန်အခွန်သက်သာခွင့်များသည်အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်သောဥပဒေများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခွန်ကောက်ခံမှုအတွက်နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာများကိုအသုံးမပြုမီ၊ သင်သည်မည်သည့် CPA နှင့်မျှမပြောရန်သေချာစေပါ။ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှိနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများကိုအထူးပြုသည့်စာရင်းကိုင်နှင့် / သို့မဟုတ်အခွန်ရှေ့နေနှင့်စကားပြောပါ။ သငျသညျပျံအရောင်များနှင့်အတူစာရင်းစစ်လွန်အများကြီးပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ညမှာလည်းအိပ်စက်အနားယူပါလိမ့်မယ်။
တဦးတည်းအလွန့်အလွန်အောင်မြင်သောမဟာဗျူဟာသင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအပေါ်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစက Apple နှင့် Google ကအသုံးပြုတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအွန်လိုင်းအခြေခံသည်နှင့်သင်စနစ်တကျသင့်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီထည့်သွင်းထားလျှင်ထိုကြောင့်, အချို့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအခွန်အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိစေခြင်းငှါ။ ဒါကဥပမာအနေနဲ့ Ira အလားတူအခွန်ငွေပေးချေမှု, ဆိုင်းငံ့စေနိုင်သည်။ ဒီမဟာဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှု၌သင်တို့ကိုလမ်းပြနိုင်သူတစ်ဦးတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တကြ် CPA ၏အခွန်အကွံဉာဏျရှိသည်ဖို့ဖောဖောသီသီအရေးကြီးပါသည်။ အခွန်ပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အဲဒီကိရိယာအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအခြားသရုပ်ဆောင်တွေတို့နေထိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံသားသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သင်၏ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သာအတွေ့အကြုံရှိအခွန်အကွံဉာဏျ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် 22 ကြိမ်ဖြင့်သင့်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းများပြားဖို့လိုသလဲ အမေရိကန်ပြင်ပလူဦးရေအတွင်းအပြင်ထက်အကြောင်းကို 22 ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ ဗြိတိန်၏အပြင်ဘက်ကမ္ဘာ့လူဦးရေသြစတြေးလျ၏အပြင်ဘက်တွင်ကနေဒါနှင့် 109 အကြိမ်, 200 သာ. ကြီးပြင်ပမှာအတွင်းအပြင်ထက် 304 ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ သင်ကစိတ်ကူးရ။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အဟောင်းဖက်ရှင်ပထဝီအနေအထားအရကျပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ကန့်သတ်သင့်သလဲ အကျိုးဆက်အားသင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထူထောင်သင်နေထိုင်ရသောတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာအရှိန်အဟုန်တည်ဆောက်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုဖြည့်စွက်၏မိနစ်အတွင်းမှာပဲရှေ့နေအခြားသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်အေးခဲနေသောစာရွက်စာတမ်း, သင့်အိမ်သင့်လုပ်ငန်းနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို file နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်သင့် hard ရရှိခဲ့သည်အရင်းအမြစ်များကိုအေးခဲခြင်းနှင့်ဖမ်းဆုပ်ဖို့ viscous တရားရဲ့စွမ်းရည်မှကြီးမားတဲ့အတားအဆီးတက်တတ်၏။
သင့်ဒေသခံကုမ္ပဏီခက်ခဲကြိမ်သို့ပြေးအဘယျသို့လြှငျကော အမေရိကန်နှင့် 2008, 2009 နှင့်အောက်ပါအချက်များကိုနှစ်ပေါင်းဥရောပစီးပွားရေးကျဆင်းမှုသတိမရကြသလော ထိုကာလအတောအတွင်းအရှေ့တောင်အာရှနှင့်သြစတြေးလျအတွက်စီးပွားရေးစန်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ပိုက်ဆံစက်ရှိခြင်းဖြင့်, သင်သည်ဒေသခံစီးပွားရေးကိုရန်သင့်ထိတွေ့မှုကန့်သတ်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများနှင့်အကောင့်အမြောက်အများတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်အတူကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်upရာမတိုးတက်မှုအလားအလာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရေပုံးတစ်စက်ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးပြီးထောင်သောင်းချီသောဖောက်သည်များအတွက်လိုအပ်သည်။ လယ်သမားတစ် ဦး သည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုရိတ်သိမ်းလိုပါကအစေ့ကို ဦး စွာစိုက်ရမည်။ မျိုးစေ့အားလုံးမရသော်လည်းအများစုမှာကြီးထွားကြသည်။ သူနှင့်သူ၏မိသားစုသည်မျိုးဆက်များစွာလူနေမှုဘ ၀ ကိုဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1906 အတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည်းအသန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနေးဗစ်, ကွတ်ခ်ကျွန်းစုများနှင့်ဒိုမီနီအတွက်ဥပဒေပြဌာန်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အခြေခံမူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပြည်နယ်အကြီးအကဲများနှင့်အတူပုံမှန်စကားပွော။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ Nevis, Cook ကျွန်းများ၊ ဒိုမီနီကာနှင့်ကွန်ဂိုနိုင်ငံများတွင်ဥပဒေပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းမူဘောင်တိုးတက်စေရန်ပြည်နယ်၏အကြီးအကဲများနှင့်အတူပုံမှန်တွေ့ဆုံကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူ Vance Amory၊ Nevis ၏ ၀ န်ကြီးချုပ် (1992 - 2006 နှင့် 2013 - 2017)
Roosevelt ရုစဗဲ့ Skerrit, ဒိုမီနီဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စီအီးအို
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ (ဘရာဇီဗီးလ်) ၀ န်ကြီးချုပ်Clément Mouamba နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေချုပ် Yonathan Amselem
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mark Brantley နှင့် Nevis ၏ ၀ န်ကြီးချုပ် (2017-Present)
နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလ 10, 2021 တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
ကျနော်တို့ Clients တွေအနေနဲ့တန်ဖိုးထား
ဂရိတ်အလုပ်, ရှိသမျှကိုသင်၏ prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား။
- Ron Andrews က
- ခရစ် Colin
ငါဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အတူလုံးဝသဘောကျမိပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်။ ခြွင်းချက် !!! ကုမ္ပဏီ၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့် EIN များကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှလက်ခံရရှိသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး သင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းကိုအသိပေးမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Ron & Roxy A.
- Ron & Roxy အေ
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း tools တွေသုံးပြီးငါအလားအလာအကြီးအကျယ်တရားစွဲဆိုမှုမှငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။